Google bu onye-isi. Oge. Anyị enweghị ike izere ya. Ọ bụrụ n’ịchọrọ irite uru na nchọta ihe, usoro SEO dị mfe - naanị gee ntị n’ihe Google chọrọ ka ị mee wee mee ya! (Na emela ka ha si eme)
Anyị nwere ike ibute ụzọ dabere na ụfọdụ nchọta nke ndị isi SEO ndị ọzọ gafere weebụ yana site na ahụmịhe nke ndị ahịa anyị. Mana n'ime ndepụta ahụ, enweghị m ike ịgwa gị ihe mmetụta nke onwe nke mgbanwe ndị a ga-eme n'ogo niile gị. Ọ bụrụ na ị nwere onye na-agwa gị na ha maara… ha na-agha ụgha.
Agaghị m arụrịta ụka banyere onye ahịa na usoro ha were maka ị nweta ọdịnaya ahụ… ma ọ bụ nuance nke ọ bụ gaa blogger outreach nke ahụ nwere njikọ na ya… mana akwụghị ya ụgwọ n'ezie maka njikọ ahụ, naanị ọdịnaya ahụ. Amaara m na ha na-arụ ọrụ nke ọma na ọkwa ahụ na-akpata ọtụtụ azụmaahịa. Ma m ka na-adụ ha ọdụ ka ha kwụsị.
Ọ bụrụ n ’ịgbanyeghị nke ọma, na ị naghị emegharị ozi na Google banyere saịtị gị, njehie edepụtara na Webmasters, ma ọ bụ na ị na-akwụ ụgwọ maka mgbasa ozi… ịkwụsị ya.